Nin dowlada ka dhunsaday lacag ku gaaraysa 60 milyan | Somaliska
Nin soo galooti ah ayaa dowlada ka dhunsaday lacag lagu qiyaasay ilaa 60 milyan oo karoon ka dib markii uu abuuray shirkad ku shaqaysa suuqa madoow.
Ninkaan oo lagu magacaabo Hassan Charkas ayaa abuuray shirkad lagu magacaabo Charkas assistans taasoo la sheegay in ay daryeel siiso dadka handikaabka ah balse waxaa la sheegay ninkaan in uu macaamiisha ka dhaadhiciyay in ay been abuuraan in ay cuuryaanyihiin taasoo uu dowlada lacag badan uga qaatay.
Hassan ayaa la sheegay in lacag gaaraya 34 milyan oo karoon uu ku shubtay bangi dibada ku yaala. Lacagta ayaa la sheegay in uu ka qaatay qasnada caymiska (Försäkringskassan).
Si kastaba ha ahaatee ninkaan ayaa diiday dhamaan dambiyada lagu soo oogay isagoo shirkadiisa ku wareejiyay wiilkiisa. Isaga ayaa laga mamnuucay in uu wax ganacsi ah sameeyo mudo 3 sano ah. Xafiiska canshuuraha ayaa sidoo kale ninkaan kala wareegay 10 milyan oo karoon.
Shirkadaha nuucaan ah ayaa ah kuwo aan cusbayn balse markii laysku qabto ayay u badantahay in uu qofku wajihi karo cinqaab kala duwan oo isugu jirta xabsi iyo ganaax lacageed oo badan.
So galoti wax turufaynaya waba sheko cusub
Asc asxbta oo dhan iyo maamulaha webka intaa kadib walal jimcale adigoo raali iga ah waxan ku weydiinaa hadii aad fursad ii heyso iyo hadii aad wax ka ogtahey safaarada ethiopia ama in systemka la badaley walal waxan maqlay in hadii foomka laga qabto interveigana aysoo maraan aan lasoo gudbinin ilaa dhiig laga soo qaado mooyaane marka arintaas maxa kala socotaa walal jimcale mahadsanid kun jeer waana ilmo iyo hooyadood
Hodan foomkii 2010 ka iyo 2011 waqtigaas somalida xanibaad baa saarneyd oo aheyd iney cadeyaan aqoonsigooda ,hadase shuruudii waa laga qaaday oo dadka caruurta isu dhalay waxaa layiri DNA bey ku cadeyn karaan,marka hadii ay caruur jiraan waa xareysan kartaa oo waa okey.haddii aad caruur isu hayninna hadda waxba haa xareynin .
asc walal yaal waidin salamey
intaas waaba yartahay ee inaw wadanka kala rogo ay eheed qashinka daboodhinka cad cadleh dad maahee kataga hanoolaadeee ee walbo masaakiinta joogto somalia,afganist,sudan,lupnan mm maw waxka siiiiyo
jimcaale maxa noogu soo jawaabi ladahay walal
K k k k wale wayab